Talyaaniga Oo Ku Tuntay Turkey, Taariikh Madow Oo La Diiwaan-geliyey Iyo Wacdarihii Lagu Furay Euro - Laacib
HomeKulamada Caalamiga AhTalyaaniga Oo Ku Tuntay Turkey, Taariikh Madow Oo La Diiwaan-geliyey Iyo Wacdarihii Lagu Furay Euro
Talyaaniga Oo Ku Tuntay Turkey, Taariikh Madow Oo La Diiwaan-geliyey Iyo Wacdarihii Lagu Furay Euro
June 11, 2021 Abdiwahab Ahmed Kulamada Caalamiga Ah, Wararka Ciyaaraha Maanta 1
Talyaaniga ayaa sii dheeraystay hoggaanka ciyaarta, iyagoo helay gool labaad oo ay u qalmayeen. Berardi ayaa kubbad u dhiibay Spinazzola oo dhinaca bidix taagan, waxaana uu laacibkani lasoo galay kubdda xerada ganaxa isagoo ku toogtay goolka. Goolhaye Cakir ayaa iska soo difaaca kubadda, balse Immobile oo difaaca dhex-taagnaa ayaa lugta ku dhigay oo ku celiyey, sidaas ayaanu Talyaanigu ciyaarta kaga dhigay 2-0.
Daqiiqaddii 79aad ayuu Insigne ciyaarta ka dhigay 3-0, waxaana uu kubbad uu soo xeegeeyey oo uu dhinaca bidix ee goolhaye Cakir uu toogtay uu hoggaanka ugu sii dheereeyey waddankiisa, waxaanay ciyaartu kusoo dhamaatay 3-0 ay guushu ku raacday Talyaaniga.
Natiijada ciyaartan ayaa ahayd mid ka mid ah kuwii ugu weynaa ee la gaadho kulanka ugu horreeya ee furitaanka Euro, waxaana Talyaaniga ay siinaysaa kalsooni dheeraad ah oo ay kala hor-tagaan labada waddan ee kale ee kula jira Group A ee Wales iyo Switzerland, halka Turkey ay u tahay niyad-jab iyo in qaab ciyaareed aad u liita ay la yimaaddeen.
Ka hor intii aanay ciyaartu bilaabmin, garoonka Stadio Olimpico ayaa waxa ka dhacday xaflad qurux badan oo muddo ku dhowaad saacad ah socotay, halkaas oo ay fannaaniin ka heeseen, balse qoob ka ciyaarkii faraha badnaa ee lagu yaqaanay ayaan jirin maadaama Fayraska Korona dartii hoos loogu dhigay fantasiyaha.
ingiriiska maalinkasta aad buun buunisaan aan qabto